Maxay Aheyd Fariintii Ay Liverpool U Dirtay Steven Gerrard Oo 10 Sannadood Ka Dib Horyaal U Qaaday Rangers | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaxay Aheyd Fariintii Ay Liverpool U Dirtay Steven Gerrard Oo 10 Sannadood Ka Dib Horyaal U Qaaday Rangers
Maxay Aheyd Fariintii Ay Liverpool U Dirtay Steven Gerrard Oo 10 Sannadood Ka Dib Horyaal U Qaaday Rangers
Liverpool ayaa fariin hambalyo ah u dirtay halyeeygooda Steven Gerrard ka dib markii kooxda Rangers ay si rasmi ah ugu guuleysatay horyaalka Scotland shalay oo Axad aheyd.
Barbarihii ay kooxda Celtic la gashay Dundee United ayaa xaqiijiyay arin la sugayay muddo bilooyin ah, kaliya 24 saacadood ka dib markii ay Rangers 3-0 kaga badisay kooxda St Mirren.
Gerrard oo todoba koob oo waa weyn ku guuleysatay mudadii uu joogay Anfield ayaan waligiis ku guuleysanin koob horyaal ah. Waxay ku qaatay kaliya labo sannadood iyo bar inuu isagoo tababare ah ku guuleysto horyaalka islamarkaana Rangers ka soo qaado dhulka, wuxuuna soo gabagabeeyay sannadihii ay Celtic iska heysatay horyaalka Scotland.
Iyagoo ku faraxsan guusha taariikhiga ah ee uu gaaray wiilkiisa, Liverpool ayaa Twitter ku soo qortay: “Waxaan dhambalyo inagoo dhan haddii aan nahay Liverpool FC u direynaa Steven Gerrard iyo kooxdiisa oo ku guuleystay horyaalka Premier League ee Scotland.”
Waxaa isna fariin hambalyo la mid ah diray ninkii ay Gerrard isla hogaamin jireen Liverpool ee Jamie Carragher kaasoo sheegay horaantii isbuucaan in xiddigii hore ee Ingariiska inuu sii joogi doono Rangers muddo sannado ah.
Carragher ayaa yiri: “Waxay muddo sannado ah ka baqayeen in Celtic ay soo gaari doonto rikoodhkooda koobabka horyaalka. Markii uu Gerrard yimid, wuxuu ahaa magacii ay u baahnaayeen ee ay ku celin lahaayeen Celtic.
“Meel dheer ayay ka yimaadeen, laakiin waxay rajeynayeen inay maalmihii guulaha ku soo laabtaan. Shaqo aad u fiican ayuu qabtay. Si weyn ayay uga danbeeyaan Celtic markii uu imaanayay.
“Waa ka qeyb qaadashadiisa tartamada Yurub waxa sarre u soo qaaday, dhaqaalihii uu ka helay ayuu dib ugu maalgeliyay kooxda”